घाँटीमा हुने खस-खसलाई कसरी हटाउने ? जान्नुहोस् घरेलु उपाय – Samacharpati
Home » घाँटीमा हुने खस-खसलाई कसरी हटाउने ? जान्नुहोस् घरेलु उपाय
प्रकाशित मिति: 2076 असोज 1 बुधबार(September 18, 2019) 3:47 PM बजे Posted By:Sunita Karki
काठमाडौँ, १ असोज । मनसुन र गर्मीको बीचको मौसमले हाम्रो स्वास्थमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । मौसम परिवर्तन हुने क्रममा हामीलाई घाँटी दुख्नु, चिसो लाग्नु सामान्य कुरा हो, तर रुघा-खोकी नै लाग्यो भने चाहिँ तपाईंले चाँडोभन्दा चाँडो त्यसको उपचार गराउनु नै उचित हुनेछ । आज हामी तपाईंहरुलाई घाँटीमा हुने खस-खसलाई कसरी हटाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिँदैछौं ।
घाँटी खस-खस गरेको बेला अमिलो र फ्रिजमा राखेको चिसो खानेकुरा खानै हुँदैन । तेल-मसला भएका खानेकुरा खानु हुँदैन । खानेकुरामा ध्यान नदिँदा तपाईंको घाँटीको समस्या झन्-झन् बढ्न सक्छ । यति गर्दा पनि तपाईंको घाँटीको खस-खस तथा अन्य समस्याहरु समाधान भएन भने तपाईंले नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ चिकित्सकलाई भेट्नु पर्छ । किनभने यसको सही तरिकाले उपचार गरिएन भने झन् ठूलो समस्या निम्तिन सक्छ ।
Tags: health news, health teps, kathmandu news, घाँटीमा हुने खस-खस